Child Labourers Poisoned on Zimbabwe Tobacco Farms - Report - allAfrica.com
Malpractice in Zimbabwe's tobacco growing industry is rampant, Human Rights Watch has reported, after an investigation documenting how children work in hazardous conditions performing tasks that threaten their health and safety. The report says child workers are exposed to nicotine and toxic pesticides and many suffer symptoms consistent with nicotine poisoning from handling tobacco leaves.
RFI, 6 April 2018
CAJ News, 6 April 2018
CHILD labour and other human rights violations are putting the lives of workers at risk in the Zimbabwean tobacco industry. According to research by a human rights organisation,… Read more »
Zimbabwe: Rampant Abuse in Tobacco Farms, Says Rights Watchdog
New Zimbabwe, 25 March 2018
The Human Rights Watch (HRW) has called on the Zimbabwean government to protect tobacco farmers and their families from abusive practices and child labour. Read more »
Tobacco farming is a pillar of Zimbabwe's economy. Tobacco is the country's most valuable export commodity - generating US$933.7 million in 2016 - and the crop is particularly ... Read more »
Zimbabwe: Revealed - The Bitter Harvest for Children Working on Tobacco Farms
Zimbabwe: Tobacco Firms Fail to Warn Farmers of Nicotine Poisoning Dangers